Ny milina fanontam-pirinty DH-Jiaolong dia naseho tao amin'ny Shanghai 2019 SINO Corrugated Exhibition. - DH Flexo Printing
Nanomboka tamin'ny 8 ka hatramin'ny 11 aprily 2019, DH dia naneho ny milina fanontam-pirinty vita pirinty Jiaolong 8 miloko amin'ny fampirantiana SINO mitafo volo 2019. Ny sakan'ny fanontana milina dia 1800mm ary ny halavan'ny famerenana ambony indrindra dia 1900mm. Izy io dia miaraka amin'ny rafitra fidirana trano mihidy, fanitsiana tsindry servo, fiara servo tsy miankina ho an'ny tobin'ny fanontam-pirinty tsirairay, fametahana taratasy mandeha ho azy & famerenana sns.
Ity modely ity dia amin'ny ankapobeny ho an'ny tsenan'ny fanontam-pirinty amin'ny famoahana azy. Ny vokatra fanontam-pirinty dia ny ankamaroan'ny taratasy ho an'ny boaty misy vatosoa toy ny boaty misy zava-pisotro sy voankazo.
Raha oharina amin'ny fanontam-pirinty nentim-paharazana, ny fanontam-pirinty dia afaka mampitombo ny herin'ny fandrenesana ary manalavitra ny trangan'ny solaitrabe. Ankoatra izany, ny piram-pirinty dia afaka manonta ireo vokatra eo ambonin'ny 100LPI, ary ny kalitao printy dia ambony lavitra noho ny fanontam-pirinty.
Niditra tao amin'ny tsenan'ny fanontam-pirinty DH efa taona maro lasa izay i DH ary nametraka milina fanontam-pirinty vita printy vitsivitsy tany Shina sy ampitan-dranomasina mba hanampiana mpanjifa hanitatra ny tsenan'ny boaty an-tendrony eo an-toerana.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady www.donghang.cn/en
← Masinina fanontana flexo haingam-pandeha DH-ROC vaovao natolotra ny mpanjifa
Gazety flexo tery DH-FP mankany Uganda →